अन्ततः आजै एमाले फुट्दै, बदलिएको क्याम्प अनुसार कुन नेता कता ? हेर्नुस् - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अन्ततः आजै एमाले फुट्दै, बदलिएको क्याम्प अनुसार कुन नेता कता ? हेर्नुस्
ओलीले नेपाल पक्षका सांसदहरुलाई कारबाही गरेमा एमाले विधिवत् विभाजनमा जान सक्छ । सांसदहरुको दल त्याग सम्बन्धी नियमावली अनुसार सांसद पद नै खारेज गर्नेतर्फ पनि ओली बढ्ने देखिएको छ ।
एमालेका १२१ सांसदमध्ये नेपाल पक्षसँग अहिले २३ जना छन् । तर, नेपालले संख्या बढाउन सक्ने बुझिएको छ ।